विरेठाँटी-मुक्तिनाथ केवलकार परियोजनाको डिपिआर लगानी बोर्डमा – Gandaki Voice
Home/गण्डकी/विरेठाँटी-मुक्तिनाथ केवलकार परियोजनाको डिपिआर लगानी बोर्डमा
विरेठाँटी-मुक्तिनाथ केवलकार परियोजनाको डिपिआर लगानी बोर्डमा
विरेठाँटी-मुक्तिनाथ केबलकार परियोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भएको छ । लगानी बोर्ड नेपाल (आइबिएन) ले सहजीकरण गरिरहेको यो परियोजनाको डिपिआर तयार गरेर लगानी बोर्डमा पेश गरेको छ ।
लगानी बोर्डका प्रवक्ता धर्मेन्द्रकुमार मिश्रका अनुसार मुक्तिनाथ दर्शन प्रालिले मंसिर १४ मा केबलकार परियोजनाको डिपिआर बोर्डमा पेश गरेको हो ।
‘बोर्डसंग गरिएको समझदारीअनुसार परियोजना विकासकर्ताहरूले बोर्डमा डिपिआर पेस गरेका छन्,’ उनले भने, ‘अब हामी परियोजनाको डिपिआर अध्ययन तथा मूल्यांकन गरेर छिट्टै बोर्डको बैठकमा पेश गर्नेछौं ।’
२०७५ को भदौ २७ बोर्ड र मुक्तिनाथ दर्शन प्रालिबीच विरेठाँटी-मुक्तिनाथ केबलकार निर्माण तथा सञ्चालनका लागि सम्झौता भएको थियो । यस परियोजनाको लागत करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ ।
कुल ८०.१६ किमि लामो प्रस्तावित केबलकार विरेठाँटी, घोरेपानी, तातोपानी, लेते, कोवाङ, टुकुचे, मार्फा, जोमसोम हुँदै मुक्तिनाथसम्मको हुनेछ । सो केवलकार निर्माणका लागि यसअघि नै फिजिविलिटी, जियोमेट्रिक लगायतको अध्ययन कार्य सम्पन्न भइसकेको छ ।
१९ वटा स्टेसन रहने प्रस्तावित सो केवलकारको सुरुको पहिलोे स्टेशन कास्कीको वीरेठाँटीमा हुने निर्माण कम्पनीले जनाएको छ । त्यसपछि क्रमशः टिकेढुङ्गा, घोरेपानी, सिखा, पाखरेबगर, तातोपानी, काभ्रे, घासा, कालोपानी लेते, कोवाङ चोखोपानी, टुकुटे, मार्फा, जोमसोममा स्टेशन प्रस्ताव गरिएको छ । केवलकारको अन्तिम स्टेशन मुक्तिनाथमा हुनेछ ।
के-के हुन्छ सुविधा ?
तीन घन्टा भन्दा कम समयमा वीरेठाँटीबाट मुक्तिनाथ पुग्न सकिने मुक्तिनाथ दर्शन प्रालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रीधर सापकोटाले बताए ।
प्राविधिक रुपमा ३० मिनेट भन्दा बढी केवलकारमा यात्रा गर्न नमिल्ने भएकाले ठाउँठाउँमा स्टेशन राखेर यात्रुलाई विश्रामको सुविधा प्रदान गरिने छ । बिहान पोखराबाट हिंडेको व्यक्ति साँझ पोखरा नै आउन सक्ने गरी सेवा प्रदान गर्न लागिएको सापकोटाले जानकारी दिए ।
केवलकार सेवाका लागि नेपालीसंग छ हजार, भारतीयसंग छ हजार भारु र विदेशीसंग एक सय डलर लिने प्रालिको लक्ष्य छ । वर्षमा ३६ लाख पर्यटनलाई मुक्तिनाथ पुर्याउन सक्ने क्षमता प्रालिसँग रहने बताइएको छ । एक दिनमा १० हजार पर्यटकलाई मुक्तिनाथ लैजान सकिने दावी गरिएको छ ।
विश्वप्रसिद्ध प्रविधिको प्रयोग गरेर केवलकार निर्माण गरिने सिइयो सापकोटाले जानकारी दिए । भूकम्प जाँदा नजिकको गोन्डुलासम्म सहजै पुग्न सकिने तथा सय किलोमिटर प्रतिघण्टासम्मको हावाले पनि कुनै असर नगर्ने प्रविधि केवलकारमा हुने उनले बताए ।
ठाउँठाउँमा रेस्क्यु स्टेशन, रेस्क्यु सवारी साधन र भर्याङ तयारी अवस्थामा राखिने बताइएको छ । रेस्क्युका लागि निजी हेलिकोप्टरसमेत तयारी अवस्थामा राखिने सापकोटाले बताए ।
केवलकारमा पाँच सय भन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने प्रालिको योजना छ । अप्रत्यक्ष रुपमा धेरैले रोजगारी पाउने सापकोटाले स्पष्ट पारे ।
होेटलहरुको संख्या प्रशस्त वृद्धि हुनुका साथै पर्यटन क्षेत्रमा अन्य लगानी बढाउन पनि केवलकारले योगदान पु¥याउने प्रालिको दावी छ ।
साइड टुरिजमहरु प्रशस्त बढ्ने सापकोटाले दावी गरे । वैदेशिक लगानी भित्र्याउन र पर्यटक बढाउन केबलकार निर्माणले सहयोग पुग्ने उनले बताए ।
कहिले बन्छ ?
लक्ष्य अनुसार काम भएमा पाँच देखि छ वर्षभित्र केवलकार पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आउने प्रालिको दावी छ । कूल लगानीमध्ये विदेशी लगानी २८ अर्ब रुपैयाँ हुनेछ ।
छ अर्ब रुपैयाँ स्वदेशी लगानीमध्ये तीन अर्ब ३० करोड रुपैयाँ नेपाली प्रवर्द्धकहरुले लगानी गर्नेछन् । बाँकी दुई अर्ब ७० करोड रुपैयाँ सर्वसाधरण शेयरबाट जम्मा गर्ने प्रालिको तयारी छ ।
पोखरामा क्रिस्टल संचालन, करोड लगानी